जीवनशैली – SamajKhabar.com
मंगलबारे, इलाम २८ चैत । चियाको गुणस्तर जाँचसहित चिया खरिद गर्न विदेशी व्यापारी इलाम आउन थालेका छन् । खरिदका लागि चियाको स्वाद परीक्षण गर्न हाल विभिन्न आठ देशका चिया व्यापारी यहाँ आएका हुन् । चिया उत्पादनको याम शुरु भएसँगै नेपालको चिया खरिद गर्न विदेशी व्यापारी आउन थालेका छन् । गुणस्तरीय चिया छनोट....पुरा पढ्नुहोस
शाकाहारीबारे ७ भ्रम, जुन चिर्न आवश्यक छ
शाकाहारी भोजन सबैभन्दा स्वस्थकर भोजन मानिन्छ । किनकि, शाकाहारी खानामा निकै कम मात्र नकारात्मक तत्व हुन्छन् । फलफूल भन्नुस् या सागसब्जी, रोटी, दाल भन्नुस् या दूध–दही, यी सबै खाद्यपदार्थ अति स्वस्थकर मानिन्छ । तर, यससम्बन्धी भ्रम पनि त्यत्तिकै छन् । धेरैले भन्छन् कि शाकाहारी भोजनमा प्रोटिन र भिटामिनको....पुरा पढ्नुहोस
‘क्यान्सरपछि स्तब्ध भए, अहिले पुस्तक लेख्दैछु’
काठमाडौं । क्यान्सर केयर नेपालले नायिका मनिषा कोइरालालाई क्यान्सर रोगका बिरामीको उपचारमा सहयोग एवं यसबारे चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा योगदान दिएबापत संस्थाको मानार्थ अध्यक्ष पद प्रदान गरेको छ । क्यान्सर केयर नेपाल, नेशनल हस्पिटल, क्यान्सर रिसर्च सेन्टर जाउलाखेल तथा होम हस्पिस केयरको संयुक्त....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाकी अहिले दुईटी प्यारा छोरी छन् । डा. अञ्जना केसीसँगको विवाहपछि गगनको पारिवारिक जीवनको फड्कोमात्र होइन, राजनीतिक जीवनको फड्को पनि निक्कै तेज गतिमा भयो । गगनको सुन्दरता, तिक्ष्णतासँग कायल हुने, घायल हुने कति थिए, कतिपय अझै छन् । तर,....पुरा पढ्नुहोस
फागुन महिना तपाईका लागि शुभ कि अशुभ ? राशिफल हेर्नुहोस्…
मेष राशिः मेष राशिका लागि यो महिना लाभदायी रहनेछ । कार्यमा प्रगति हुनुका साथै आर्थिक उन्नति पनि हुने देखिन्छ । भूधनबाट विशेष लाभ रहनेछ । सोचका काम पूरा हुनुका साथै नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । प्रेम जीवन सफल र सुखद् रहने छ । अध्ययनको क्षेत्र मध्ययम फलदायी रहने छ । व्यापार वाणिज्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य....पुरा पढ्नुहोस
दैनिक व्यायाम गर्दा हुने फाइदाहरु यस्ता छन्…
यदि तपाईं अधिकांश व्यक्तिजस्तै नियमित रुपमा व्यायाम गरी पसिना बगाउन खासै जाँगर चलाउनु हुन्न भने व्यायाम गर्न तपाईंलाई पर्याप्त उत्प्रेरणाको कमी छ भन्ने बुझ्नुहोस्। अहिले ‘टाइम’ म्यागाजिनका लागि कभर स्टोरी ‘द एक्सरसाइज क्योर’ लेखिरहँदा २० प्रतिशत अमेरिकीहरूले मात्र उनीहरूलाई दिइएको परामर्श....पुरा पढ्नुहोस
हिजोआज न्यास्रो मेट्न सामाजिक सञ्जाल नै काफी छन् । उमेरदारले पार्टनर खोज्न मेला धाउनबाट मुक्ति पाएको वर्षौं भइसक्यो । हुँदाहुँदा अब मनसँगै तनको प्यास मेटाउनसमेत सामाजिक सञ्जाल सारथि बनिरहेका छन् । यही सेरोफेरोमा नेपालका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ चढेको डेटिङ एप ‘टिन्डर’को बढ्दो ज्वरो र....पुरा पढ्नुहोस
डाक्टरलाई प्रश्न : यौन सन्तुष्टी नभए तनाव किन बढ्छ ?
म २६ वर्षकी विवाहिता हुँ । हाम्रो ४ वर्षको छोरा छ । हामी दुवैलाई यौन चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । जब छोरो निदाउँछ तब हाम्रो यौन क्रियाकलाप सुरु हुन्छ । तर, श्रीमान छिट्टै उत्तेजनामा आउनुहुन्छ र यौन चाहना मेटाउन खोज्नुहुन्छ तर म भने इमोसनमा आइसकेकै हुन्न । त्यसैले म यस मामिलामा त्यति धेरै सन्तुष्ट हुन....पुरा पढ्नुहोस
एजेन्सी । दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशाको समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको विघम्टन विश्वविद्यालयलले हालै गरेको एक अध्ययनले सो तथ्य पत्ता लागेको जनाएको थियो । सुत्ने समयावधि र मानसिक अवस्था बीचको सम्बन्धको तुलनात्मक....पुरा पढ्नुहोस